Henderson oo sheegay loolanka cusub ay wajihi doonto Liverpool kaddib markii ay ku guuleysatay Premier League - Hargeele - Wararka Somali State
(Liverpool) 01 Luulyo 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jordan Henderson ayaa sheegay in loolanka kale ay wajihi doonto Reds kaddib markii ay ku guuleysatay horyaalka Premier League markii ugu horeysay muddo 30 sano ah kaddib, ay tahay inay joogteyso u ciyaarista sida ay ugu guuleysan laheyd koobab.
Liverpool ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 19-aad ee Ingiriiska ee taariikhdeeda, kaddib markii ay sanadkii lasoo dhaafay ku soo wada guuleysatay tartamada kala ah Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup.
Haddaba Jordan Henderson ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan dooneynaa inaan hore u sii socono oo aan horumar sameyno, sababtoo ah waxa ugu adag ee hadda ina horyaala ayaa ah inaan ilaalino xasilloonida iyo heerkeena ugu sareeya, si aan u sii wadno ku guuleysiga koobab”.
“Kani wuxuu noqon doonaa dagaalkeena cusub, waxaan kalsooni buuxda ku qabaa kooxda, iyo inaan sameyn karno arrintaas”.
Intaas kaddib Jordan Henderson ayaa xaqiijiyay in tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp uu ka caawiyay ciyaartoyda inay ilaashadaan diirad saaridooda waxa ay doonayaan inay ku guuleystaan.